UTİKADထိပ်သီးအစည်းအဝေး 2019 သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ For ကိုရှေ့သို့လှည့်သည် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်UTİKADထိပ်သီးအစည်းအဝေး 2019 သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ For ကိုရှေ့သို့လှည့်သည်
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
utikad ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရှေ့ဆက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ sector အသွင်ပြောင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုထုတ်လုပ်သူများအသင်း (UTİKAD) သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကဲ့သို့၊ ယခုနှစ်တွင်“ အနာဂတ်ကိုထွန်းလင်းစေ” သည်အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ 10 အောက်တိုဘာလ 2019 UTİKADထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကြာသပတေးနေ့တွင် 'Transformation Forward' ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကဏ္ of ၏ကြီးမားသောစိတ် ၀ င်စားမှုဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
UTİKADထိပ်သီးအစည်းအဝေး 2019-Transformation Transformation သည်တူရကီကုန်တင်များ၊ ရွှေစပွန်ဆာ၊ Istanbul စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့် Turkcell ၏ကြေးထောက်ပံ့သူ၊ EAMEAK ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းနှင့် SOFT Bilişimတို့ ပူးပေါင်း၍ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့သူအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစုစည်းပေးသည်။ ။
UTİKADသည်Dönüşüm Forward Transformation Summit'n တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ လယ်ကွင်းတွင်ထိပ်တန်းအမည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များအပြင်စီးပွားရေးလောကရှိအမှုဆောင်များကိုစုစည်းခဲ့သည်။ တစ်နေကုန်အစည်းအဝေးများသည်စီးပွားရေးဘဝ၊ အထူးသဖြင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သောဟောကိန်းများကိုအဓိကထားသည်။
သင်ယူခြင်းဒီဇိုင်းများပညာရေးကျွမ်းကျင်သူNurşahYılmaz၏ပြဇာတ်သည် UT ChairmanKAD ဥက္ကre္ဌ Emre Eldener ၏ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအစဖြစ်သည်။ UTİKAD၏ဥက္ကChairman္ဌ Emre Eldener သည်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ and နှင့်စီးပွားရေးလောကကိုအလင်းဖြာပေးမည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလက်ခံကျင်းပသည့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ gibi ငါပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းတွင်အလေးထားပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ငါးနှစ်အတွင်းယနေ့ပြုလုပ်သောအလုပ်အများစုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်သစ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်နည်းလမ်းများလာပါပြီ။ ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပြောင်းအလဲကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတင်ပြချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များသည်အနာဂတ်အတွက်အကြံဥာဏ်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏အဖွင့်မိန့်ခွန်းကိုတူရကီလေကြောင်းလိုင်း၏ဥက္ကPresident္ဌဖြစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုတင်ပို့သူများအသင်းဥက္ကİ္ဌİlkerAycıကပြောကြားခဲ့သည်။ Aycıကပြောကြားရာတွင်ယခုအခါနိုင်ငံများအနေဖြင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များမှတစ်ဆင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသည့်ကာလသို့ ၀ င်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ de ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသက်ဆိုင်ရာလိပ်စာများသို့အမြန်ဆုံးနှင့်စီးပွားရေးနည်းလမ်းဖြင့်ပေးပို့သင့်သည်။ ဤသည်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ more ကိုပိုမိုဗဟိုပြုသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုတင်ပို့သူများသမဂ္ဂနှင့်တူရကီလေကြောင်းလိုင်းများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများ၏အဓိကအချက်အခြာကျသောနေရာတွင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုထားရှိခဲ့ပါသည်။
မူအရ port မှဆိပ်ကမ်းကိုစျေးကွက်အတွင်းမှတူရကီရဲ့လေကြောင်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသောဝန်ဆောင်မှုများ၏စျေးကွက်တန်ဖိုးကိုလည်းနောက်ဘက်3ဒေါ်လာဘီလျံကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထည့်သွင်း, $5ဘီလီယံခန့်Aycıရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ တူရကီရဲ့လေကြောင်းကုန်တင်စျေးကွက်, တာက Cargo ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်က 80 ရာခိုင်နှုန်းကတိုးတက်မှု၏အကြီးဆုံးရှယ်ယာရှိပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, "ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင် 24 86 လေယာဉ်တင်လေကြောင်းရန်ကုန်တင်သင်္ဘော ပို. ပို. ကမ္ဘာပေါ်မှာလေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီများကအများဆုံးနိုင်ငံတွေ၏ခေါင်းစဉ်ကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။ လေကြောင်းကုန်စည်များ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ 13 မှ7သို့မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာပထမ ဦး ဆုံး 5၊ ပထမ ဦး ဆုံး3ထဲသို့ဝင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးလေကြောင်းတံတားသုံးခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ”
THY နှင့် HIB တို့၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှဥက္ကı္ဌAycıသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများအား HIB ၏ခေါင်မိုးအောက်တွင်ပေါင်းစည်းရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်ပြည်ထောင်စု၏အင်အားခိုင်မာစေရန်အထောက်အကူပြုရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အဖွင့်မိန့်ခွန်းများအပြီးတွင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည်နတ်သမီးပုံပြင်များ၊ နတ်သမီးပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းပြောသူများနှင့်အနုပညာကုထုံးပညာရှင်ဂျူဒစ်လစ်ဘာမန်နှင့်အတူဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ Liberman ကသူ၏တင်ဆက်မှုတွင်ပုံပြင်များနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယနေ့ကမ္ဘာကြီးတည်ရှိသည့်နေရာ၌အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ဘ ၀ သည်ရေရှည်တည်တံ့ရန်အတွက်လူတိုင်းသည်မျှဝေရန်ပွင့်လင်းမြင်သာသင့်သည်။ Liberman ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်သောပုံပြင်သည်ပရိသတ်ကိုများစွာချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများတွင် Blockchain၊ Artificial Intelligence နှင့် Digital အသွင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Blockchain နှင့်အတူ, လွယ်ကူသော, ခြေရာခံများနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အနာဂတ်ကိုအလေးပေးခဲ့ပါတယ်နှင့်ကကဏ္ all အားလုံးအတုထောက်လှမ်းရေးစနစ်ဖြင့်အသွင်ပြောင်းလိမ့်မည်ဟုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည်
ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ပထမဆုံးအဖွဲ့မှာ Blockchain 101 စာအုပ်ရေးသားသူ Ahmet Usta မှတည်းဖြတ်သော Blockchain၊ Blockchain Maersk တူရကီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှ General Manager Esra Yaman နေ့နှင့် Sevilay Kurt စပီကာအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သော panel က IBM ကတူရကီနည်းပညာခေါင်းဆောင်, ကထိုကဲ့သို့သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစည်းကမ်းများကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဘယ်လိုအရာ software ကို blockcha ဂေဟစနစ်, ဘဏ္ဍာရေး, အရေးကြီးသောအဆောက်အဦများ, အထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဤပြောင်းလဲမှုနှင့်အသွင်ပြောင်းဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့အပေါ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။
IBM ကနည်းပညာခေါင်းဆောင် Sevilay Kurt တူရကီ; Im သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျေနပ်မှုမရှိဟုယူဆကြပါစို့။ သူတို့ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒီစနစ်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုနဲ့အညီလိုက်နေဖို့လိုတယ်။ Maersk တူရကီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနေ့အချိန်၌ခုနှစ်တွင်အထွေထွေမန်နေဂျာ Esra Yaman; “ စက်မှုလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်။ မှတ်တမ်းကွန်ယက်သည်အလွန်ကြီးမားပြီးသုံးစွဲသူများသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုစီမံရန်လိုအပ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစံသတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ Blockchain 101 ၏စာရေးဆရာ Ahmet Usta ကအပြိုင်အဆိုင်များသောစီးပွားရေးလောကတွင်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းရောက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
စျေးကွက်အတွင်းအချင်းချင်းယှဉ်ပြိုင်နေသည့်ကုမ္ပဏီကြီးများသည် Blockchain နည်းပညာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ရန်အတွက်တူညီသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေကြကြောင်းကိုလည်းပီကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းတွင်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများပါ ၀ င်သော်လည်းကဏ္sectorsများသာမကအဖွဲ့အစည်းများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုကိုနားလည်သင့်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။
BO စွန့်စားမှုများနှင့်အစားထိုးသည့်အခါအခွင့်အလမ်းများကိုလက်လွတ်မခံသင့်” ကင်းမျှော်စင်အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်
Habertürkစီးပွားရေးမန်နေဂျာမှ Dr. Serdar Kuter မှသုံးသပ်သူမှာ“ Economy Cycles Turning (that)” ကိုဟောပြောသူအဖြစ်ပါ ၀ င်သည်။ Murat Kubilay, တူရကီရဲ့စီးပွားရေး၏လက်ရှိအမြင်အပေါ်တစ်ဦးတင်ပြချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒေါက်တာ Murat Kubilay, ကမ္ဘာ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှု၌တည်ရှိ၏, နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစီးပွားရေးဆွဲထုတ်လို့မရဘူးနှင့်တူရကီ၏အရေးကြီးဆုံးပြဿနာများ၏ကြွေးမြီတိုးမြှင့်ဖို့ဖော်ပြထားသည်။ ဒေါက်တာ အစီအစဉ်များရေးဆွဲစဉ် 2020 တွင်ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်ဟုကိုဘီလီကထပ်ပြောသည်။
“ DIGITAL TRANSFORMATION သည်အကောင်းဆုံး Logistic ကဏ္INတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်”
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Okan Tuna မှတည်းဖြတ်သောDönüşüm Digital Supply Chain in Transform” panel တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုကိုအကောင်းဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့်ကဏ္ log သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်၊ မကြာသေးမီကဤဥပမာများ၏ကောင်းသောဥပမာများရှိကြောင်းအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ Turkcell ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမန်နေဂျာÖmer Faruk Erkal သည်ဟောပြောသူအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာစီမံကိန်းများကို Turkcell နှင့်သူမျှဝေခဲ့သည်။ Erkal မှကုမ္ပဏီအတွင်းရှိလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူပြုလုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ အဖွဲ့၏နောက်ထပ် guest ည့်သည်မှာ Ford Otosan ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးမန်နေဂျာ Osman SelçukSarıoğluဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှိနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Müşteriသုံးစွဲသူများစိတ်ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပြconcernနာဖြစ်သည်။ Digitization သည်ဖောက်သည်များ၏အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုအစီအစဉ်တကျစီစဉ်ထားတယ်။ ”
DIGITAL TRANSFORMATION ART အတွက်“ လမ်းပြမြေပုံအခြေအနေ
ဒီဂျစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေါင်းဆောင်နှင့်ပညာရှင် Kozan Demircan တို့သည် Ner အဖွဲ့၏ပါဝင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Artificial Intelligence Transformation သည်အဘယ်မှာနည်း။ Kozan Demircan ၏တင်ဆက်မှုတွင်အသွင်ပြောင်းမှုတွင်အတုထောက်လှမ်းရေး၏အခန်းကဏ္izedကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံမရှိသည့်ကုမ္ပဏီများသည်နံရံပေါ်သို့ကျရောက်လိမ့်မည်ဟု Demircan မှပြောကြားခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ယန္တရားများချမှတ်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်း
ရောင်းချခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အတုထောက်လှမ်းရေးအထောက်အပံ့ဖြင့် blockchain နည်းပညာသည် micro-export ခေတ်ကိုစတင်မည်ဖြစ်ပြီး crypto-based ကုန်ပစ္စည်းဖလှယ်မှုသည်အစီအစဉ်တွင်ပါလိမ့်မည်။ Demircan မှပြောကြားသည်မှာ 2021 သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္inမှစက်ရုပ်များသည် 22,4 ဘီလီယံဒေါ်လာစျေးကွက်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကိုUTİKADဥက္ကPresident္ဌ Emre Eldener ကသုံးသပ်သည်။ ler Business World Leader” panel တွင် EAMEAK ကုန်သည်များအသင်း၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Tamer Kıran၊ ကုန်ပစ္စည်းတာဝန်ခံလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Turhan Özenနှင့် DFDS ၏ဒုဥက္ကPresident္ဌ Fuat Pamukçuနှင့်လူငယ်များအလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကChairman္ဌတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေခဲ့သည်။
UTİKADဥက္ကPresident္ဌ Emre Eldener ကဤကဏ္ the သည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားပြီးUTİKADအနေဖြင့်ဤအပြောင်းအလဲများနှင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအကြောင်းကဏ္ and အားအသိပေးခြင်းနှင့်ဟောပြောသူများအားနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
DTO ဥက္ကPresident္ဌဖြစ်သူ Tamer Kıranကရေကြောင်းကဏ္inတွင်ဒီဂျစ်တယ်လုပ်ခြင်းကိုမလုပ်နိုင်သူများသည်ကဏ္ all အားလုံးကဲ့သို့ပင်ဂိမ်းမှထုတ်ပယ်ခံရလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ technology သည်နည်းပညာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တို့မှလည်း၎င်း၏အကျိုးအမြတ်ကိုရရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယခုနှစ်တွင်မောင်းသူမဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသင်္ဘောများသည်ပင်လယ်၌ဝန်များကိုသယ်ဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအတိုနှင့်လူသိများသောအကွာအဝေးများမှစတင်သော်လည်း၎င်းသည်စီးပွားရေး၏ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသင်္ဘောများသည်အတုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်နှင့်အရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်လူတို့မမြင်နိုင်သည့်အန္တရာယ်အချို့ကိုကြိုမြင်ပြီးသတိပေးနိုင်သည်။ 75 သည်လူ့အသက်အခြေခံသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအခါအလိုအလျောက်နှင့်ဉာဏ်ရည်တုများသည်ပင်လယ်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမတော်တဆမှုများကိုများစွာလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဒီအခြေအနေကလုပ်သားအင်အားကိုအနည်းငယ်လျော့နည်းစေမယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
“ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိုထည့်မစဉ်းစားရ။ Z
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၏အရေးပါမှုကိုပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ other နှင့်အခြားသောကဏ္mostများစွာတွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းအရေအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းအနေဖြင့်အလေးအနက်ထားကြောင်း Tamer Kıranကပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ကာလတွင်အရေးပါသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်တိန်နာကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ကွန်တိန်နာလုပ်ငန်းကိုကွန်ပျူတာဟက်ကာများကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေမှထွက်ရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လုပ်ငန်းအားလုံးကိုရပ်တန့်ရန်လိုသည်။ စနစ်များကိုပြောင်းလဲသည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူး။ မရနိုင်သောအန္တရာယ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
“ ငါ့ကိုခဏထားခွင့်ပေးပါ၊ အချိန်ကုန်သွားပြီ”
Tamer Kıranကစီးပွားရေးအရှိန်အဟုန်တွင်စီးပွားရေးအတိုင်းအတာသည်ပိုမိုအရေးပါလာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ပိုကြီးတဲ့စွမ်းရည်များရရှိရန်နည်းလမ်းမှာပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းများဖြစ်သည်။ အမရေိပေးသွင်းအဖြစ်တရုတ်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကြီးထွားခွင့်ပြုမည်မဟုတ်: သင်ရှင်သန်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစည်းနိုင်ရန်အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရပါလိမ့်မယ် "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတူရကီ-အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဟုဆိုလျက်, အောက်ပါစကားလုံးများကိုဆိုပါတယ်" ။ ကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်နှင့်ဦးစားပေးပစ်မှတ်ထဲမှာတူရကီ-အမေရိကန် 100 ဒေါ်လာဘီလျံ 12 ကဏ္ဍဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဏ္ sectors များအနက်တစ်ခုမှာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည်ကဏ္ many များစွာတွင်ကြီးမားသောပမာဏများကို ၀ ယ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုစီးပွားရေးနှင့်လျင်မြန်စွာသယ်ဆောင်နိုင်သည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်တင်ပို့သူများသည်တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများကိုလည်းထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည်။ ”
TRANSIT TRANSIT 80 တူရကီကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ရာခိုင်နှုန်း…
အကူးအပြောင်းတူရကီအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်တူရကီ Cargo လေကြောင်းလိုင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Turhan Ozen နေဖြင့်ကစားပေးထားသောအခန်းကဏ္ဍအဓိကထားခြင်းဖြင့်သူ၏မိန့်ခွန်းစတင်တူရကီ Cargo ဝင်ငွေသာ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတူရကီရဲ့ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန်မှ လာ. ကြောင့် 20 ရာခိုင်နှုန်းအကူးအပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှရရှိသောကပြောပါတယ် ။ သူဟာငါတို့သည်ဤလောကအဆင့် xnumx'nc တန်းစီအတွက်xnumx'üncülükတိုတောင်းသောအချိန်ကနေလေထုကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထ ", တူရကီရဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုလာမယ့်နှစ်တွေမှာ xnumx'y ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ Ozen အတွက်ရွှေ့မည်ဟုဆိုသည်။ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောရှယ်ယာသည် 80 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ 12 သို့တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်ဆုံးငါးနေရာတွင်ပါဝင်သည်။ သူ၏တင်ဆက်မှုတွင်Özenသည်လေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်တူရကီကုန်တင်ကြီးထွားမှုပုံသဏ္talkedာန်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
Ik ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်တင်လေယာဉ်အမြောက်အများကို 24 သို့တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကို ပို၍ ပင်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ ကုန်တင်လေယာဉ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 88 သို့ရောက်ရှိသည်။ ဤသည်လေကြောင်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အများဆုံး ဦး တည်ရာအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီကော်ဇောဟုခေါ်သောကမ္ဘာ့လေကြောင်းကုန်စည်၏အသွားအလာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ 126 ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံးလေကြောင်းကွန်ယက်ရှိသည်။ 319 သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးနေရာများသို့ရောက်ရှိပြီးနိုင်ငံအတွင်း 60 ပျံသန်းမှုဖြစ်သည်။ လက်ရှိစျေးကွက်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအားဖြင့်ဤစျေးကွက်ကိုသုံးဆသို့မဟုတ် ၄ ဆတိုးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုတ္ထအမြင့်ဆုံးလေဆိပ်ဆက်သွယ်မှုညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်နှင့်လေကြောင်းကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံး ၅ နေရာတွင်ပါဝင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ခုနစ်နာရီသာလေယာဉ်ဖြင့် 40 ၏မြို့တော်နှင့် XNUMX ရာခိုင်နှုန်းစျေးကွက်ကို Istanbul မှရောက်ရှိနိုင်သည်။ ”
“ ISTANBUL လေဆိပ် CARGO Terminal သည်စမတ်ကျလိမ့်မည်”
Turhan Özenကကုန်တင်ကုန်ချနိုင်မှုအရကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်လာမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ asıဤစက်ရုံသစ်သည်အကြီးမားဆုံးနှင့်ခေတ်မီဆုံးဖြစ်သော်လည်းစမတ်ကျသည့်စက်ရုံလည်းဖြစ်သည်။ ဒီကုန်သေတ္တာ terminal ကို Smartist လို့ခေါ်မယ် ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုပ်လုပ်ငန်းစဉ်အလိုအလျောက်ကို set up ပါလိမ့်မယ်။ စက်ရုပ်နှင့်လုပ်ခြင်းသည်အမြန်နှုန်း၊ အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ to ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ နောက်နည်းပညာတစ်ခုကဝတ်ဆင်နိုင်သောနည်းပညာများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်တိုးပွားအဖြစ်မှန်မျက်မှန်။ ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာငါတို့စတင်အကောင်အထည်ဖော်တော့မယ်။ ”
“ ကျွန်ုပ်တို့၏ E-commerce ပမာဏသည်9ကြမ်းပြင်ကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မည်”
Özenသည်ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာတူရကီကုန်သွယ်မှု၏အဓိကရူပါရုံကိုgeliştirmekဖွံ့ဖြိုးဆဲစျေးကွက်များအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီး kullanarak ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးကိုအတိုင်းအတာအရအသုံးချခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပံ့ပိုးပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ e-commerce သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု၏အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်“ e-commerce သည်တူရကီကုန်ပစ္စည်းတွင်သုံးဆတိုးလာသည်။ လာမယ့်ကာလမှာ 8-9 ကြမ်းပြင်ကိုရောက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Özenသည်တရုတ် WeWorld Express နှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီသည်လက်ရှိတွင် 15 နိုင်ငံတွင်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကွန်ယက်သို့နိုင်ငံအသစ်များထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုဖော်ပြထားသည်၊ ၎င်းပူးပေါင်းမှုနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းသည်တူရကီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအကျိုးအမြတ်ရရှိစေမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင် ဦး ဆောင်မှုကို AMAK ဆက်သွယ်ခြင်း
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏နောက်ဆုံးဥက္ကspeaker္ဌမှာလူငယ်အလုပ်အမှုဆောင် - စီးပွားရေးပြည်သူ့အစည်းအရုံး၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Fuat Pamukçuဖြစ်သည်။ 30 ကကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး 25 ကုမ္ပဏီများ၏အမြတ်အစွန်းသည်အလားတူဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က 10 ပျမ်းမျှအမြတ်အစွန်းရှိသည်ဟုပြန်ပြောပြသည်။ Pamukcu, ယခုဇယားရှိအမြတ်အစွန်း၏ရာခိုင်နှုန်း 45 ရာခိုင်နှုန်း, အပြောင်းအလဲအမီလိုက်နိုင်ပြီးစာရင်းထဲတွင်ကောင်းစွာမအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ပြန်ဖိအားပြန်သွားလေ၏။
သငျသညျကုမ္ပဏီများအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းကောင်းသောအောင်နိုင်သလား? Fnat Pamukçuကမေးခွန်းများကိုဖြေကြားရာတွင် 20 ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်အောင်မြင်နိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ နည်းပညာကအရမ်းမြန်တယ်။ အဘယ်အရာကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဤအသွင်ပြောင်းနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ့်ပြောင်းလဲမှုကနည်းပညာထက်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲ။ နည်းပညာလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှနည်းပညာနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုမြန်လာသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်အသွင်ပြောင်းမှုယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ဆောင်သင့်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတော့ပိတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ်။ အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေသော 10 ကုမ္ပဏီခြောက်ခုသည်နည်းပညာကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ကွယ်မှဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုသိမ်းယူခြင်းသည်ရှေ့သို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်
နည်းပညာစာရေးဆရာနှင့်လမ်းကြောင်းရှာဖွေသူ Serdar Kuzuloğluသည်Öte Other Side of Technology ၏အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Uz အခြားနည်းပညာ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာတွေစောင့်ကြိုနေသနည်း။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏နည်းပညာနှင့်အသွင်ပြောင်းမှုမည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ကမ္ဘာသစ်၏အစီအစဉ်နှင့်ရှင်သန်ရန်နည်းလမ်းများမှာအဘယ်နည်းဥဇ၏ထူးခြားသောတင်ဆက်မှုနှင့်အတူKuzuloğluသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသည့်ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည်သမိုင်းကြောင်းအရကုမ္ပဏီများကိုအောင်နိုင်ခြင်းတွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်ဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
2025 အလုပ်သမားများအောက်ရှိလာ 75 သည် 35 တွင်လုပ်သားအလုပ်၏ XNUMX% ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်”
Dönüşüm Forward Transformit ထိပ်သီးအစည်းအဝေး” အဖွဲ့၏နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာသင်ယူရေးဒီဇိုင်းများကိုတည်ထောင်သူနှင့်လေ့လာမှုကျွမ်းကျင်သူTuğbaşanşalı၏ဖြည့်ညှင်းမှုအောက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ သဘောပေါက် panel ထဲမှာ; စကားစမြည်ပြောဆိုသည်မှာအစ္စတန်ဘူလ်ရှိအမျိုးသားပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ Perna ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှဥက္ကBer္ဌ Berna Öztınaz၊ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Serkan Gür။ အမျိုးသားပညာရေးလက်ထောက် Serkan Gur ၏အပြောင်းအလဲမျိုးဆက်အတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သော Istanbul ပြည်နယ်ဒါရိုက်တာကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ Serkan Gürသည်သူ၏မိန့်ခွန်းတွင် Istanbul-School ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း Istanbul Model အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဤအခြေအနေတွင်UTİKADနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ K UTİKADနှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ ၀ င်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်ကာလ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားဘွဲ့ရပြီးအလုပ်ခန့်အပ်မည်။ Serkan Gürကကဏ္sectorအလိုက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်ကျောင်းသားများသာမကကျောင်းသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သင့်ကြောင်း၊ အမျိုးသားပညာရေးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနအနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ဖွင့်လှစ်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တူရကီပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲရေးအသင်းဘုတ်အဖွဲ့ (PERYÖN) ဥက္ကဋ္ဌလည်း 2025 75 ခုနှစ်တွင် Bern Öztınazန်ထမ်းများ၏အသက်အရွယ်နှင့်တူရကီအတွက် 35 ရာခိုင်နှုန်းကိုအောက်မှာဟုလူငယ်များ၏ရှိရေးမည်, ထိုလူငယ်များကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ခံရဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုကဏ္ work သည်လူငယ်များနှင့်မလုပ်ကိုင်လိုသောကဏ္amongများဖြစ်သည်ဟုအလေးအနက်ပြောကြားသည်။ Öztınazကဤအမြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်ကဏ္sectorsများ၊ ကုမ္ပဏီများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏စွမ်းအားကိုအသုံးပြုသင့်သည်၊ မျိုးဆက်သစ်သို့ ရောက်ရှိ၍ မှန်ကန်စွာပြောဆိုသင့်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများအဆုံးသတ်ရေးအတွက် LOGISTIC CRITICAL အရေးပါမှု”
ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏နောက်ဆုံးအဖွဲ့သည်ivçinaLivable Future for .. Boğaziçiတက္ကသိုလ်ဌာနနှင့်ရာသီဥတုသိပ္ပံပညာရှင်။ ဒေါက်တာ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်-UNDP ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကသူတို့ဦးတည်ရာကိုမျှဝေရာအရပ်, တူရကီÖzayနွေသင်တန်းညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အတူ Levent Kurnaz SDSN, ရေရှည်တည်တံ့သော။
UTİKADထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို 2019-Forward သို့အသွင်ပြောင်းလဲသည့်အပြီးတွင် 'မိသားစုဓာတ်ပုံ' ဖြင့်ပြီးစီးသည်။
ပြောင်းမှ UTIKAD ကဏ္ဍဒီတစ်နှစ်တာ "Next ကို"
UTİKAD, ကုန်သည်များအသင်း၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ More ပိုမို…
Beykoz တက္ကသိုလ် UTIKAD နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့သွေးခုန်နှုန်းကိုကိုင်တွယ်
UTİKAD Başkanı Eldener: “Lojistik Sektörü ATLAS’ı…
Logitrans အတွက် UTIKAD ကဏ္ဍအစည်းအဝေး